Mora kokoa noho ny taloha ny mahazo vokatra vokatra amin'ny Yudonpay | Androidsis
Azoko antoka fa ianareo rehetra, toa ahy, dia manana kara-pahatokisana (avy amin'ny magazay lehibe isan-karazany, avy amin'ny fivarotana fitafiana izay ividiananareo lamba matetika, fivarotana manokana ...). Afaka miaraka amin'izy ireo ianao tombony amin'ny tombony manokana manokana na izany aza, ny fitondrana azy rehetra ao anaty kitaponao dia mety ho fitsapana mafy. Ary tsy milaza aminao akory aho raha ny amin'ny fahitana ny iray amin'izy ireo manokana.
Yudonpay rindrambaiko malalaka izay nanavao ny rafitra karatra teboka amin'ny alàlan'ny fanangonana azy rehetra amin'ny toerana iray ary hanamorana ny fampiasana azy ho anao. Ary amin'ny fanavaozana vaovao, dia ho mora kokoa noho ny hatramin'izay ianao izao avoty ny isao amin'ny fanomezana mahafinaritra.
1 Ny karatra fahatokisanao rehetra ao Yudonpay
2 Ny tsenan'i Yudonpay vaovao
Ny karatra fahatokisanao rehetra ao Yudonpay
Any Espana dia tena mpankafy klioba tsy fivadihana isika. Hany ka, araka ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny orinasan Nielsen, ny fampiasana an'io karazana fampiharana any Espana io dia 25%, ambony lavitra noho ny salan'isa eoropeana 18%, ary teboka roa ambony noho ny salan'isan'izao tontolo izao. Ary ny klioba tsirairay dia samy manana ny lalàny, ny fomba fiasa ary ny karatra. Midika izany rehetra izany fa indraindray mety ho sarotra aminao ny mahita ny karatra mety na manararaotra ireo tombony azo. Manoloana izany, Yudonpay dia mampivondrona ireo karatra fahatokisana anao amin'ny fampiharana iray, mba hahafahanao mahazo tombony amin'ny tombony rehetra azo tsy misy olana.
Afaka miaraka amin'i Yudonpay ianao mifandray hatramin'ny klioba 171 miaraka amin'ny asany rehetra, anisan'izany ny Travel Club, Kiaki, Vips, Cinesa, Game, BP, Renfe, Rakuten, Iberia, Fnac… Ary ho fanampin'izany, azonao atao koa ny manampy klioba 72 hafa hahazoana ny hevitrao sy ny fangatahana fampahalalana.
Araka izany, azonao atao sahady ny mieritreritra ireo tombontsoa lehibe ho azonao amin'ny fampiasana azy Yudonpay amin'ny isan'andro isan'andro, fampiharana izay, ho fanampin'izay, maimaim-poana tanteraka izany. Na izany aza, miaraka amin'ny fanavaozana farany azy, ny Yudonpay dia mampiditra endrika vaovao hahaliana anao: tsena mba hahafahanao safidio mora foana ny fanomezanao.
Ny tsenan'i Yudonpay vaovao
Yudonpay dia efa fampiharana lehibe, ilaina, miasa ary miaraka amina endrika mahaliana, mahafinaritra sy mora ampiasaina, lafin-javatra tena ilaina ho an'ny fampiharana manamora ny fiainana. Na izany aza, ny kinova 2.0 dia mahatonga azy io ho tsara kokoa, satria ny ekipan'ny fampandrosoana dia resy lahatra fa afaka mihatsara kely foana ianao.
Amin'io lafiny io, ny kinova Yudonpay vaovao dia manampy fampiasa "tsena" vaovao ho endri-kintana. Ity dia fizarana vaovao izay aseho avokoa ny fampiroboroboana, ny vokatra katalaogy ary ny tombony azo avy amin'ny klioba tsirairay anisan'izany ianao. Amin'izany fomba izany dia tsy ho diso amin'ny tolotra tokana ianao satria ny sisa ataonao dia ny manisy marika ny vokatra tadiavinao ary manohy manangona ireo teboka ilaina amin'ny fampiasana Yudonpay. Raha vantany vao azonao ireo teboka dia azonao atao ny manavotra ny fanomezanao.
Amin'izany fomba izany dia tsy mila miditra intsony ianao amin'ny fotoana rehetra hahitanao ireo teboka nangoninao, ireo izay tsy anananao hahazoana ny vokatra tadiavinao, tsy mila manatona ny katalaogy akory ianao. ankehitriny avadika ny dingana: mifidy ny vokatra aloha ianao, avy eo, ho tanjona dia manangona teboka mandra-pahatratraranao azy. Tena mora, sa tsy izany?
Mazava ho azy fa tsy izany no zava-baovao ateraky ny kinova 2.0 an'ny Yudonpay, izay nandalo dingana fanatsarana lalina izay mitondra antsika ho zava-baovao:
Volavola vaovao, tsotra kokoa aza amin'ny fisoratana anarana-fisoratana anarana voalohany.
Vaovao famolavolana poketra amin'ireo karatra nampianao.
Safidy vaovao amin'ny karatra ankafizinao mba hahafahanao manana ilay ampiasainao akaiky indrindra.
Fampandrenesana Push ampahafantarina anao momba ny fampiroboroboana tsara indrindra azonao atao amin'ny kliobanao
Ny endrik'ireo klioba dia namboarina mba hanamorana ny fidirana amin'ny isa, fampahalalana, sns.
Ary ny lisitry ny klioba azonao ampiana ao amin'ny Yudonpay dia manitatra hatrany.
Tena matotra! Fampiharana maimaimpoana izay manamora ny fampiasanao ny karatra fahatokisanao ary manampy anao hahazo fisondrotana sy fanomezana. Inona no andrasanao ampidino Yudonpay maimaim-poana ao amin'ny Google Play?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mora kokoa noho ny hatramin'izay ny fahazoana vokatra fanomezana amin'ny Yudonpay
Carlos Gonzalez dia hoy izy:
Mampiasa karatra fahatokisana be dia be aho, satria mandehandeha be any am-piasana. Ny marina dia tsy nitafy azy ireo aho satria tsy nahazo aina ahy ny nitondra azy ireo niaraka tamiko foana.
Ity app ity dia mety amiko. Handramako izany tsy misy fisalasalana.
Valiny tamin'i Carlos González
Alefaso aloha ny sary amin'ny Samsung Galaxy A5 sy A7 2018 manaraka